Hami Sabaiko Sansar Deep Sansar : November 2012
Hami Sabaiko Sansar Deep Sansar
तपाईहरु का केहि लेख छ भने हामीलाई पठाएर हजुर को लेख दुनिया माझ पुर्याउनु होस् । info.deepsansar@gmail.com
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पुनः ओबामा निर्वाचित
अमेरिकी राज्य कसले सम्हाल्ला ???
अमेरिका मा भै रहेको राष्ट्र पति को चुनाब मा वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नै दोस्रोपटक निर्वाचित भएका छन् ।
जारी मतगणनामा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार एवं वर्तमान राष्ट्रपति ओबामाले जित्नका लागि चाहिने २ सय ७४ इलेक्ट्रोल मत पाइसकेका छन् । भने यसै बीच प्रतिद्वन्द्वी रिपब्लिकन पार्टीका मिट रोम्नीले २०३ मत मात्र प्राप्त गरेको । अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । हिजो मात्रै मैले अमेरिकी राज्य कसले सम्हाल्ला ?? भन्ने पोस्ट लेखेको थिएँ आज कसले सम्हाल्ने छिनो फानो भएको छ ।
ओबामाको पुनः जीतसँगै उनको चुनावी अभियान कार्यालयमा हजारौं सर्मथकहरुले खुसीयाली मनाइरहेका छन् ।
अघिल्लो साता आएको आँधी स्याण्डीका कारण ओबामालाई जित्न कठिन हुने अनुमान गरिएको भएपनि उनले भारी मत अन्तरमा जितेका हासिल गर्न सफल भएका छन् ।
ल तपाई को मन मा पनि केहि उत्सुकता पकै पनि भएको हुनुपर्छ मेरो विचार मा । विश्वकै ध्यान आकर्षण गरेको महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकामा आज Nov6राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ । राष्ट्रपति बन्ने दौडमा छन् वर्तमान राष्ट्रपति एवं डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार बाराक ओबामा र रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार मिट रोम्नी । तपाई लाइ कसले बाजी मर्ला भन्ने लागेको छ र कसको समर्थन गर्नु हुन्छ ???
ह्वाइटहाउसमा पुग्न कस्ले बाजी मार्ला भन्ने उत्सुकता यतिबेला अमेरिकी नागरिकमा मा मात्रै हैन विश्वभरमै देखिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रचार प्रसार अभियान सकिएलगत्तै निर्वाचनको अन्तिम घडीमा मानिसहरुको ध्यान कसलाई मत दिने भनेर अहिलेसम्म निर्णय लिइनसकेका मानिसहरुप्रति केन्द्रित छ ।
स्यान्डी आँधीपछि भने ओबामाको पक्ष बलियो भएको विश्लेषण गरिएको छ । स्यान्डीले नराम्ररी प्रभावित पारेको न्युजर्सी राज्यका गभर्नर रिपब्लिकनका नेता क्रिस क्रिस्टीलेसमेत ओबामाको तारिफ गर्न थालेका छन् । पूर्व विदेशमन्त्री कोलिन पावेल पनि ओबामाको समर्थनमा ओर्लिएका छन् । रिपब्लिकन पार्टीका समर्थकलेसमेत स्यान्डी आँधीपछिको अवस्थालाई ओबामाले गरेको नेतृत्वको प्रशंसा गरेको खबर रही आएको छ ।
(Online Baghchal) अनलाई बाघचाल
नमस्कार मित्र जन आज एउटा मैले Info पाएको छु किन share नगर्ने त ??? अब खेलौं न त बाघ छल तपाई हामी सबै जना दिमाग/बुद्धि खियाउने हैन त??? प्रा...
इन्टरनेट स्पिड चेक गर्ने हैन त ??
तपाई हामि सबै लाइ थाहै छ तपाइँ ले जडान गरेको इन्टरनेट Slow चल्छ भनेर चाहे ADSL हो चाहे world link चाहे Broadlink हो | सायेद तपाइँ लाइ थाहा ...
ल तपाई को मन मा पनि केहि उत्सुकता पकै पनि भएको हुनुपर्छ मेरो विचार मा । विश्वकै ध्यान आकर्षण गरेको महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकामा आज No...
अब सामान्य परिक्षण बाट थाहा हुन्छ कति बाचिन्छ ।
तपाइँ लै कहिले जिज्ञासा लागेको छ ? आफु कतिन्जेल बाँच्न पाइन्छ भन्ने ??? यदि यो जिज्ञासा छ भने तपाई को इक्षा पुरा भएको छ । हालसालै को भा...
अमेरिका मा भै रहेको राष्ट्र पति को चुनाब मा वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नै दोस्रोपटक निर्वाचित भएका छन् । जारी मतगणनामा डेमोक...
Copyright © 2012-2012 Hami Sabaiko Sansar Deep Sansar . All Rights Reserved.
This theme designed by Bavotasan . Bloggerized by Free Blogger Template.